Bushpig - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Bushpig [Potamochoerus larvatus]
I-Bushpigs abonwa emini kwaye anokuba yingozi, njengoko zisebenzisa izikhwebu zazo ezibukhali xa zisongelwa. Inani lazo liye landa kwiindawo apho abadlali bebanjwe khona kwaye apho kungabikho ukuzingela. Bondla uluhlu lwezinto zokutya ezisuka kwiingcambu kunye nembewu kwiinambuzane, amaqanda kunye ne-carrion. I-Bushpig nayo yaziwa ngenxa yezolimo zazo.
Isisindo (seTyhini) 48 - 66 kg Isiqendu (indoda) 46 - 82 kg ubude (iSetyhini) 115 cm Ingqimba (indoda) 115 cm Ixesha eliPhantsi kweenyanga enye Angabantwana abaselula 3 - 8 DA zizalwa ziyi 700 ubunzima OrderArtiodactylaFamilySuidae
Abantwana aba-3 - 8 bazalwa ngoNovemba-Januwari emva kwexesha lokuthotyelwa kweenyanga eziyi-± 4.
Iinqwelo zibanzi ngaphezu kwee-Warthog, kwaye amahlumela amazolo abonakala ngokucacileyo kwi-spoor. Amapupha ayo aphezulu ahlengahlengiswa ukuba afumane uhlobo lomhlaba apho zitya ukutya. Izilwanyana zenza ukusetyenziswa okuqhubekayo kwimizila efanayo ukuya kwondla iindawo, ngaloo ndlela zenza iindlela ezincinci, ezicacileyo.